कसरी होला महराको राजनीतिक 'ल्यान्डिङ'? महराको बदलिएको भूमिका : भवितव्य या राजनीतिक षड्यन्त्र
रामकुमार डिसी सोमबार, फागुन ५, २०७६, २१:०९
काठमाडौं- संघीय संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासत पुगेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार १ सय ४१ दिन लामो हिरासत र जेल बसाइ टुंग्याउँदै ‘तत्काल’का लागि रिहा भए।
सोमबार आएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा महरालाई मूलतः दुई आधारमा टेकेर सफाइ दिएको देखिए 'पीडितको बयान र औंठा छाप'।
तत्कालका लागि महरा सबै अरोपबाट मुक्त भएका छन्। 'तत्काल' किनभने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकीलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। पुनरावेदनबाट जिल्लाको आदेश उल्टन पनि सक्छ।
पूर्ववर्ती एकीकृत नेकपा (माओवादी)मा शक्तिशाली महासचिव र राज्यको पाँचौं शक्तिशाली पद सभामुखको आसनमा बसिसकेका महरा गम्भीर अभियोगबाट मुक्त भएसँगै प्रश्न उब्जिएको छ- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा महराको स्थान अब के होला? महरा स्वयं के गर्लान्?
लामो समय राजनीतिको केन्द्र र सत्तासँगै रहेका महरा सक्रिय राजनीति बाहिर रहँदैनन्।
पार्टीले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन दिएको निर्देशनमा केवल सभामुख पदबाट मात्रै राजीनामा दिनुमा उनको राजनीतिक चेतले नै काम गरेको थियो।
हिजो गरेको त्यही निर्णयले उनी पूर्वसभामुख भए पनि पूर्व सांसद हुनबाट जोगिए।
उनका लागि सांसदको मैदान खुल्लै छ।
१५ असार २०१५ मा रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङमा जन्मिएका महरा सदरमुकाम आसपासका नामी शिक्षक थिए। पूर्व माओवादीका धेरै नेताहरूलाई पढाएका महरा सो पार्टीभित्र 'महरा (एम) सर'का नामले परिचित नेता हुन्।
०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट सक्रिय राजनीतिमा आएका महरालाई राजनीतिको केन्द्रमा आउन धेरै समय लागेन। सक्रिय राजनीति सुरुवातको १२ वर्षमै उनी जनताको आवाज बोकेर संसद छिरिसकेका थिए।
२०४८ सालको निर्वाचन उनी रोल्पा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता महराको राजनीतिले छलाङ मात्रै मारेको छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी सशस्त्र युद्ध परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएयता मात्रै पनि उनले निकै महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
महरा सरकार–माओवादी वार्ताकालमा भएका तीन वार्तामध्ये एउटा वार्तामा सदस्य र दुईटामा टोली संयोजक थिए। पटकपटक पार्टी प्रवक्ता भएका उनी पूर्व उप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत हुन्।
पटकपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनिसकेका महरा २०६४ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा गएका ८३ माओवादी विधायकमध्ये एक थिए र संसदीय दलको नेतृत्व गरेका थिए।
महराले आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा जे जति उपलब्धि हात पारेका छन्, त्यसमा उनको व्यक्तिगत क्षमता कारक त हो नै, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को स्नेहले पनि उत्तिकै प्रभाव पारेको नकार्न सकिन्न।
महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि प्रचण्डले महरासँग परामर्श लिने गरेका थिए।
महराप्रति प्रचण्ड कुन हदसम्मको प्रेमभाव राख्छन् भने सोमबार कारागारमुक्त भएसँगै दिएको बधाइले पनि संकेत गर्छ।
अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै प्रचण्डले अर्का नेता माधवकुमार नेपाललाई सँगै राखेर बधाइ दिएका छन्।
बानेश्वरको अर्याल होटलमा छलफलमा बसेका प्रचण्ड र नेता नेपालले एउटै फोनबाट महरालाई बधाइ दिएका थिए।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको महराप्रतिको यो प्रेम र पूर्व एमाले नेता नेपालको यो सहानुभूति नेकपाभित्र सुरु भएको आन्तरिक राजनीतिको नयाँ आयाममा अर्थपूर्ण हुने नै भयो।
महरा, एमसिसी र ओली
१३ असोजमा महरामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेसँगै सभामुखबाट राजीनामा दिएर पक्राउ परेका महराप्रति प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख खोलेरै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्न नकरात्मक भूमिका खेलेको आरोप लगाए। एकपटक हैन, उनले पटक–पटक महराको आलोचना गरे एमसिसीका विषयमा।
ओलीको आरोपलगत्तै सत्तारुढ नेकपा भित्र झन्डै ३ वर्षअघि सम्झौता भइसकेको एमसिसीविरुद्ध आवाज उठ्यो। भलै एमसिसी अघि बढाउने केही चरणमा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले महरा स्वयं संलग्न भएका किन नहुन् तर विशेषगरी पूर्व माओवादी खेमाले एमसिसीकै कारण महरालाई ‘यौनकाण्ड’मा फसाइएको भन्दै ‘षड्यन्त्र सिद्धान्त' प्रतिपादन गरे।
महराको जेल बसाईसँगै ओलीमा एमसिसी चाँडै पारित गराउने उत्कट चाहना देखियो। उता नेकपाभित्र एमसिसीविरुद्ध बलियो समीकरण बन्यो।
नेकपाको एक पंक्ति यो विकाससँग मात्र जोडिएकाले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको छ, अर्को पक्षले यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेको छ।
मंसिर २९ मा सुरु भई सात दिनसम्म चलेको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे तीव्र मत विभाजन देखिएपछि त्यसले राष्ट्रिय बहसको रुप लिइसकेको छ। बहस अझै जारी छ।
स्थायी समिति एमसिसीका विषयमा टुंगोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय लिने अधिकार स्थायी समितिभन्दा माथिल्लो तह सचिवालयलाई दिइएको थियो। अधिकांश शीर्ष नेतृत्व रहेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा बहुमत सदस्य अहिलेकै स्वरुपमा एमसिसी पारित नगर्ने पक्षमा छन्।
मध्य माघमा सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकमा पनि एमसिसी अहिलेकै स्वरुपमा पारित गर्न नहुने बलियो मत देखिएपछि कार्यदको बाटो समाएको थियो।
एमसिसीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र भीम रावलसमेत रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनेपछि पूर्वानुमान गरिएझैँ परिणाम आएको छ।
१० दिनको म्याद पाएको कार्यदलले समयमै सुझाव पेस गर्न सकेको छैन्। एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदलमा रहे पनि उनको केही जोर चलेन र थप समय मागियो।
एमसिसीप्रति त्यति सकरात्मक नरहेका प्रचण्ड र नेपालले संयुक्त बधाइले एमसिसी झनै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। थुनामुक्त भएलगत्तै धन्यावाद दिन जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि महराले अर्थपूर्ण भनाइ राखेका छन्।
‘एक देशभक्त नेपालीका रुपमा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा मेरो पहिलो र उच्च प्राथमिकतामा सधैं थियो, अहिले पनि छ र सदैव रहिरहनेछ,’ नेकपाकै धेरै नेताले एमसिसी राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत रहेको भनाइ राखिरहेका बेला महराले भनेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता इतिहासदेखि नै गौरवपूर्ण रहेको छ र सधैं रहिरहनेछ।’
कसरी होला नेकपामा 'ल्यान्डिङ'
फेरि पनि प्रश्न उही हो– अदालतबाट सफाइ पाएका महराको नेकपाभित्र ‘ल्यान्डिङ’ कसरी होला?
महरा सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहँदैनन् भन्ने कुरा रिहा भएलगत्तै उनले जारी गरेको विज्ञप्तिले प्रष्ट पार्छ।
सभामुखबाट राजीनामा दिएको भए पनि संसद् सदस्यमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनेछ। उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद यथावत छ। अदालतको फैसलाको चिठी आउनेबित्तिकै संसद् सचिवालयले उनको सांसद् पदमा भएको निलम्बन फुकुवा गर्ने छ।
त्यसपछि नेकपामा उनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? ओलीले कसरी ‘रियाक्ट’गर्लान्? प्रचण्डको महराप्रतिको प्रेम पहिलाझैँ सशक्त होला? भन्ने प्रश्न आउँछन्।
पूर्व एमाओवादीमा महरा महासचिव थिए। दुई पार्टी एकताअघि बनेको सत्ता बाँडफाँटको सहमतिअनुसार महरा २५ फागुन २०७४ मा सभामुख बनेका थिए।
३ जेठ २०७५ मा दुई पार्टीबीच एकीकरण भई बनेको नेकपामा शक्तिशाली ९ सदस्यीय सचिवालय समिति बनेको छ। महरा नेकपामा पुर्नस्थापित हुने अवस्थामा उनको व्यवस्थापन ठूलो टाउको दुखाइको विषय हुने निश्चित छ। पूर्व माओवादीमा प्रभावशाली नेता रहेका महराले नेकपामा आफ्नो विशेष हैसियत खोज्ने छन्।
त्यसमा प्रचण्डको विशेष भूमिका रहने छ। महरालाई हतार–हतार बधाई दिएबाट पनि थाहा लाग्छ– महराप्रतिको उनको प्रेम अहिले पनि उत्तिकै छ। त्यसमाथि नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेता माधव नेपालको सहानुभूतिको विशेष अर्थ रहने छ।
महरालाई प्रभावशाली भूमिकामा फर्काउन प्रधानमन्त्री ओलीले नचाहने कुरा प्रष्ट छ। तर, अहिले नेकपामा ओलीले नचाहेका पनि धेरै कुरा हुन थालेका छन्। महरालाई पुर्नस्थापित गराइ छाड्ने कुरामा प्रचण्ड लागेमा भैंसेपाटी भेलापछि नेकपाभित्र फेरिएको समीकरणको शक्ति राम्रोसँग बुझेका ओलीले यसमै निहुँ खोजेर आफ्नो शक्ति झन् कमजोर बनाउन पक्कै लाग्ने छैनन्।
‘जि–टू–जी खरिद प्रक्रियामा सरकारको प्रतिनिधि सेना हुन सक्दैन’
टिप्पणी : ‘बदनाम चेहरा’ लुकाउन सेनाको दुरुपयोग
ओम्नीबाट रद्द गरिएको मेडिकल सामग्री खरिद टेन्डरको जिम्मा सेनालाई